चाडपर्वमा जित र हारको खेल कत्तिको भैरहेको छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः आश्विन २३, २०७४ - साप्ताहिक
दसैंमा जित र हारको खेल आत्मीय ढंगबाट सम्पन्न भएको थियो । दसैंपछि जित र हारको खेल तँछाड–मछाड तरिकाले अझैं कडा र द्रुत गतिमा भैरहेको छ ।
- सन्तोष श्रेष्ठ, संगीतकार
भैरहेकै छ, अझै भैरहने समय बाँकी छ ।
- खुश्बु खड्का, अभिनेत्री
कुर्सीमा बस्नेहरू सधै जितिरहन्छन् । खेतमा पसिना बगाउनेहरू हारिरहन्छन् । हाम्रो देशमा यो खेल सधैं चलिरहकै छ— हाम्रो देशको नियति ।
- प्रमोद खरेल, गायक
मेरो जित अरूको भन्दा फरक छ । आफू गीत–संगीतको क्षेत्रमा जित्नका लागि १०–१२ वर्षदेखि दु:ख गरिरहेको छु । यसपालि दसैंमा सांगीतिक कार्यक्रमका लागि साइप्रस आइपुगेको छु । त्यसैले आफ्नो कमाइलाई नै मैले मेरो सबैभन्दा ठूलो जित मानेको छु ।
मैले त बुझिनँ, कस्तो जित–हारको खेल भन्नुभएको ?
- दुर्गा खरेल, गायिका
एकदमै चलिरहेको छ । अहिले पनि खेल भैरहेको छ र म हार्दैछु ।
- नीतु पोखरेल, अभिनेत्री
यसपालि रमाइलो टिभी र एक्सन स्पोर्ट्सको ओपनिङमा साह्रै व्यस्त भएँ । अष्टमीको रात जन्मस्थल स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका पुगेँ । नवमीको दिन तीर्थस्थल आलमदेवीको दर्शन गर्दैमा बित्यो । टीकाको दिन टिका लगाउँदैमा बित्यो । यो पल्ट तास खेल्न त परै छाडौं, छुन पनि भ्याइएन ।
- दयाराम पाण्डे, गीतकार/टेलिभिजनकर्मी
पूरै हार भयो, जुठो परेर दसैंमा त्यति रमाइलो भएन ।
- जान्वी बोहोरा , अभिनेत्री
गिद्धैगिद्धको सहरमा म जस्तो सिनोको कसरी हुन्छ जित ?
- मौसम मधुर, गायक
एकदिन खेल्दा नराम्रोसँग हारियो । त्यसको पर्सिपल्ट त्यसको दोब्बर जितियो । यस्तो खेल रमाइलोका लागि दसैं–तिहारमा मात्र खेल्ने गरेको छु ।
- युवराज चौंलागाईं, गायक
खेलेको भए पक्कै हार्थें । आफूलाई त एक–दुई पेग लगाएपछि संसारै जितेजस्तो लाग्छ अनि भुक्लुक्क निदायो । सपनामा कहिले जितिन्छ, कहिले हारिन्छ । ब्युँझियो, जस्ताको तस्तै ।
- भोलाराज सापकोटा, अभिनेता
यो पालि हारको खेल भयो, अब तिहारमा ऐश्वर्य लागेपछि जित होला भन्ने आशा छ ।
- दिवाकर भट्टराई, निर्देशक
जिन्दगी नै हार र जितको खेल होइन र ?
- विश्वेश श्रेष्ठ, व्यवसायी
यो पालि मलाई खासैं दसैं लागेन । काम गर्नु परेकाले जुवाले भन्दा कामले मलाई जित्यो ।
-प्रवीण श्रेष्ठ, निर्देशक/सम्पादक
मैले त यो प्रश्न नै बुझिनँ ।
- श्रद्धा प्रसाईं, अभिनेत्री
यो पाली नो कार्ड्स, स्पोर्ट्स च्यानल हेरेरै रमाइलो गरियो ।
- सुनिल थापा, अभिनेता
आफ्नो चाहिँ यो पालि खासै हार नभएको, जितैजित मात्र भएको र दसैं साह्रै राम्रो भएको अवस्था ।
- किरण लाकौल, अभिनेता
हरेक पल हारजितको खेल हुन्छ । जिन्दगी नै हारजितको खेल हो । जति नै जिते पनि एकदिन हार्नु नपर्ने कोही छैनन् ।
- नृपेश उप्रेती, गीतकार
जिन्दगी रहुञ्जेल जित र हारको खेल भैरहन्छ । दसैंपछिको त झन के कुरा भयो र ?
- नरेन्द्र कंसाकार, अभिनेता
दसैंअघि पनि थियो, अहिले पनि निरन्तर छ ।
- लक्ष्मण पौडेल, निर्देशक, नेपाल आइडल
जित र हारको खेल भैरहेकै छ, तर तासको होइन गाँसका लागि ।
- बुद्धि तामाङ हैट, अभिनेता
खेल जित र हारकै लागि खेलिने भएकाले हार वा जित जे भए पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।
- सौरभ अधिकारी, अभिनेता
एकदम, किनभने दसैंअघि धेरै हारेँ, अब जित्छु कि भन्ने आशा छ ।
- भावना गुरुङ, मोडल
प्रकाशित :आश्विन २३, २०७४
सौराहामा फुड फेस्टिबल
३४ बर्षपछि हङ्कङ, घरेलु मैदानमै पराजित